Isan'andro Fantasy Sports (DFS) fandriana mpiara-miasa DraftKings, ary FanDuel dia nametraka ny vola mampiasa tsara amin'ny fandraisana mpiasa avokoa ny tena kaja, Steven Perskie, ny filazana ny hevitra fa DFS tsy 'filokana' eo anoloan'ny Antenimieram-pirenena ny Fizahan-tany, Lalao sy ny zava-Kanto Komity tamin'ny alatsinainy.
Tamin'ny alatsinainy, ny Senatera Tanora atolotra ny misaraka DFS volavolan-dalàna (SB 592 Fantasy Fifaninanana Voly Lalàna), ny fampiasana ny tetika toy izany koa toy ny hafa 10-milaza izay rehetra milaza fa DFS dia lalao ny fahaiza-manao ary noho izany dia tsy tokony ho latsaka ambany ny mahery sandry online filokana ny lalàna hatraiza no coushatta casino avy houston. Fa ny faharoa DFS volavolan-dalàna nametraka fitarainana any Florida rehefa ny Loholona Jason Brodeur namorona ny HB 149: Fantasy Fifaninanana & Fantasy Fifaninanana Mpandraharaha volavolan-dalàna 5 dollar minimum deposit usa online casino.
Dana Tanora Antontan-taratasy DFS Volavolan-dalàna Amin'ny ranomainty mbola lena eo amin'ny fanapahan-kevitry ny Floridian Nifehy ny Indostria Komity mba handefa ny filokana ny volavolan-dalàna SB 8 ny hahazoana maka ny Komity, Dana Tanora tsy naka na inona na inona vintana 5 dragon deluxe slot machine. Ny komity koa hoy ny HELO ENY rehefa tonga ny fanohanana ny fanapahan-kevitra mba hilaza Donald Trump sy ny marika spanking governemanta vaovao mba hitandrina ny orona avy ny aterineto casino raharaham-barotra 5 dollar poker chip distribution. Ny lalàna milaza Isan'andro Fantasy Fanatanjahan-tena lalao ny fahaiza-manao nandroso tao Florida roa sy New Jersey alatsinainy noho ny Dana ny Tanora sy ny teo aloha Casino fanaraha-Maso ny Filohan'ny Kaomisiona momba ny Steven Perskie. Ny zava-misy fa folo ny fanjakana efa nanaiky fa DFS tsy filokana lalao, ary efa nanomboka ny fandaharana ny lalàna sy ny fahazoan-dalana amin'ny asa ihany koa no nanampy ny antony 5 dollar slot machine jackpot.